İzmir İstanbul Otoyolu Güzergahı – RayHaber | raillynews
[16 / 01 / 2020] I-Ordu Boztepe Cable Car yahanjiswa ngabantu abangama-2019 amawaka abakhweli ngo-796	52 Army
[16 / 01 / 2020] Isikhululo sikaloliwe saseMuratlı sadlula iBhulorho iVuselelwe kwaye yavulelwa Inkonzo	59 Tekirdag
[16 / 01 / 2020] Izithintelo kuZothutho loLuntu eAntalya	07 Antalya
[16 / 01 / 2020] Inqanaba lokuqala leKonya Metro liya kuba phakathi kwe-NEU noMasipala weMeram	42 Konya
[16 / 01 / 2020] Inani leengozi liyehla kwiibhasi ze-IETT	34 Istanbul
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara10 BalikesirIzmir Istanbul Uhola wendlela
04 / 08 / 2019 10 Balikesir, 16 Bursa, JIKELELE, Highway, Systems Wheel Wheel, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, ETURKEY, VIDEO
gebze orhangazi izmir motorway balikesir yokudibana kunye ne-akhisar junction
Icandelo loMphathiswa Wezothutho kunye neZiseko zoLwakhiwo Jikelele weendlela eziphezulu ze-2 ngesaziso seGazethi yaseburhulumenteni ka-Agasti 2019, iBalıkesir West Jement kunye ne-Akhisar Junction sele ivuliwe ukuze ihanjwe.
Izmir Istanbul Motorway ukuba ivulwe
UGeb Gebze-Orhangazi-İzmir (Kubandakanywa i-Izmit Bay Ukuwela kunye neNdlela yoQhagamshelo) yeProjekthi yeNdlela, eyayinikwe iModeli yoKwakha-kuSebenza ;;;
Phakathi kweBursa Ring Road West Junction kunye neBalıkesir North Junction (Km: 104 + 535-201 + 380) ngaphakathi kwe-Bursa Ring Road Interchange (Balıkesir-Edremit) Icandelo,
(Balıkesir Edremit) phakathi kwe-İzmir West Crossroad ne-Akhisar Crossroad (Km: 232 + 000: İ-315 + 114)
Umthetho N.6001 kwiiNkonzo zeCandelo loMlawuli Jikelele woohola bendlela. Icandelo loMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo.
1- La macandelo e-motorway aya kuvulelwa izithuthi kwi-04.08.2019: 23: 59 date and time.
2- Ukungena nokuhamba ngemoto akuvumelekanga ngaphandle kweendawo ezithile (iCrossroads, iToll yokuqokelela iiNdawo zokuqokelela njl njl.) Kunye neemeko. Ayivumelekanga ukuba ivule, idilize, isike, kwaye kungenjalo itshabalalise ezi zithintelo, kuba iifayile zentambo okanye udonga olufakwe ecaleni komda wendlela lufakiwe ukunqanda ukuphuma.
3- Ukufikelela kweli candelo, evulekileyo kwendlela elawulwayo, abahamba ngeenyawo, izilwanyana, izithuthi ezihamba ngeenqwelo zokurhweba, iitrokta zerubhi ezivuthayo, imishini yokwakha kunye neebhayisiki zithintela ukungena.
4- Isantya esincinci esifanelekileyo si-40 km / h kunye nesantya esiphezulu ngumda ovunyelwe yimigangatho yejometri. (UMax 120 km //hr)
5- Akuvumelekile ukuyeka, ukupaka, ubuyele kwaye ubuyele kweli candelo kunye nemibutho evulekileyo kwizithuthi njengoko i-Accessible Highway. Kwiimeko ezinyanzelekileyo, iqela elikhuselekileyo lokukhusela (iBhanki) lingasetyenziswa.
6- Ukuba iziko ezinemida yomgwaqo zifuna ukubeka iibhodi zazo kwizakhiwo abazenzayo imisebenzi yazo, kufuneka zifumane imvume kwi-Directorate General of Highways neNkampani.
7- UGeb Gebze-Orhangazi-İzmir (Kubandakanywa i-Izmit Bay Ukuwela kunye neNdlela yoQhagamshelo) yeProjekthi yeNdlela, eyayinikwe iModeli yoKwakha-kuSebenza ;;; I-Bursa Interchange West Junction- (i-BalıkesirEdremit) phakathi kwe-Bursa Interchange West Junction kunye neBalıkesir North Junction (Km: 104 + 535-201 + 380), (Balıkesir-Edremit) Umda phakathi kweBalıkesir West Junction kunye ne-Akhisar Junction (Km) (I-232 + 000: İ-315 + 114) iya kuqhutywa yiNkampani yeKhontrakthi ngokwesivumelwano sekhontrakthi yokwakha, ukugcina nokusebenza.
8- 6001. 15. ukuba ibhengezwe ngokuhambelana neli nqaku.
Imephu yeendlela zaseIstanbul Izmir
Indlela yokuhlawula iindleko kunye neendleko zeprojekthi
15 July Martyrs Ibhuloho Indlela yokuvuselelwa kwe-Asphalt isebenza kwi-O1 i-Motorway
Imirhumo ye-transit ye-Imitbul ye-Istanbul-Izmir
I-4 yezigidi zemali ezichithwa ngosuku ngosuku lweprojekthi ye-Istanbul-Izmir Highway
Irhuluneli uGüvençer uVavanya İzmir İstanbul uKwakhiwa kwendlela enkulu
I-CHP kaDemiroz yabuza imithi enqamlekileyo ye-Istanbul-Bursa-Izmir Motorway
Istanbul-Bursa-Izmir I-XMUMX bin 11 iya kunika ibhizinisi kumntu
Isayinwe enkulu kwiProjekthi ye-Iimbulib-Izmir Motorway Project
Izmir-Istanbul Inqanawa yokuqhubela emthonjeni
Istanbul-Izmir Highway iya kutshabalalisa idolophana
Istanbul-Bursa-Izmir Inqanawa Ehamba Ngaphambili I-Target
I-65 kilometers Icandelo le-Istanbul Izmir Motorway livuliwe
Istanbul İzmir Motorway -Icandelo leekhilomitha ze192 liyavula
Imephu yeNdlela yaseIstanbul Izmir
Indlela yeBursa Ring
INguqulelo yeNdlela yeBursa Ring
Isikhululo sikaloliwe saseMuratlı sadlula iBhulorho iVuselelwe kwaye yavulelwa Inkonzo
Izithintelo kuZothutho loLuntu eAntalya
Inqanaba lokuqala leKonya Metro liya kuba phakathi kwe-NEU noMasipala weMeram
USodolophu u-Aktaş Ucacise ngoTyalo-mali lwe-Smart Urbanism olwenziwe eBursa
Ukuhlawulwa kweKhadi kwii-ISPARK Car Parks kwandisiwe
Namhlanje kwimbali: I-16 kaJanuwari 1939 I-Istanbul Sirkeci Station
I-18 indawo yokuma esuka kwiAntalya ukuya kuAlanya
Erciyes Unokhenketho lwaBantu abangama-53 amawaka abasuka kwiidolophu ezingama-90
Iziko leDenizli Ski eligijima kwiRekhodi linenani leNdwendwe
Olona phawu lubalaseleyo lweMoto yoNyaka: Fiat!
IHyundai Motorsport 2020 WRC Ilungele iXesha
I-KIA iqala ngo-2020 ngamathuba